UFC PPV ကို live လွှင့်ခဲ့တဲ့ Gamer – REDPlayer
Twitch ပေါ်က A.J. Lester ရဲ့ လူမသိသူမသိ channel တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Lester_Gaming ဟာ UFC video game ကစားဟန်ဆောင်ပြီး စနေညတုန်းက UFC 218 ကိုတိုက်ရိုက်လွှင့်သွားခဲ့တာ သိပြီးကြလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ Twitch မှာ PPV program တွေကို live stream လုပ်တဲ့ကိစ္စတားမြစ်ထားတာ သေချာတဲ့ အကြောင်းတော့ ရှိပါတယ်။ program rights holder မူပိုင်ရှင်တွေနဲ့ သူတို့ စိတ်မရှုပ်ချင်ဘူးပေါ့။ အခုတော့ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ EA Sports ရဲ UFC beta ဆိုပြီးတင်လိုက်တာက အလုပ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
“သူက တကယ် ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ ထိုးနေတဲ့ ပွဲကို EA ကထုတ်တော့မယ့် UFC beta test လုပ်ပြနေတယ်ဆိုပြီး လွှင့်သွားတာ။”
Lester ကတကယ်ကစားပြနေသလို သူကိုယ်တိုင်တိုးတိုး ပြောပြီး caster လုပ်သွားတာပါ။ ဒီအချိန်အထိတော့ Twitch ကသူ့ကို ဆက်သွယ်တယ် လို့ မကြားရတဲ့ အတွက် လွှတ်ပေးလိုက်တယ်နဲ့ တူပါတယ်။ အတည်ပေါက်ကြီးနဲ့ တိုက်ရိုက်လွှင့်လိုက်တာ ဒီတစ်ခါတော့ အရေးယူမခံရပဲ သူ့ channel ကိုလူပိုသိသွားတယ်ပေါ့လေ။ အရင်ကတော့ Fortnite ကစားပြနေတဲ့အုပ်စုတွေထဲကပါ။ အခုတော့ video ကိုပြန်ဖြုတ်ချထားတာတွေ့ရပါတယ်။
witch ပျေါက A.J. Lester ရဲ့လူမသိသူမသိ channel တဈခုဖွဈတဲ့ Lester_Gaming ဟာ UFC video game ကစားဟနျဆောငျပွီး စနညေတုနျးက UFC 218 ကိုတိုကျရိုကျလှငျ့သှားခဲ့တာ သိပွီးကွလောကျပွီထငျပါတယျ။ Twitch မှာ PPV program တှကေို live stream လုပျတဲ့ကိစ်စတားမွဈထားတာ သခြောတဲ့ အကွောငျးတော့ ရှိပါတယျ။ program rights holder မူပိုငျရှငျတှနေဲ့ သူတို့ စိတျမရှုပျခငျြဘူးပေါ့။ အခုတော့ ဒီလိုမဟုတျပဲ EA Sports ရဲ UFC beta ဆိုပွီးတငျလိုကျတာက အလုပျဖွဈသှားတယျလို့ဆိုရမှာဖွဈပါတယျ။
“သူက တကယျ ကွိုးဝိုငျးထဲမှာ ထိုးနတေဲ့ ပှဲကို EA ကထုတျတော့မယျ့ UFC beta test လုပျပွနတေယျဆိုပွီး လှငျ့သှားတာ။”
Lester ကတကယျကစားပွနသေလို သူကိုယျတိုငျတိုးတိုး ပွောပွီး caster လုပျသှားတာပါ။ ဒီအခြိနျအထိတော့ Twitch ကသူ့ကို ဆကျသှယျတယျ လို့ မကွားရတဲ့ အတှကျ လှတျပေးလိုကျတယျနဲ့ တူပါတယျ။ အတညျပေါကျကွီးနဲ့ တိုကျရိုကျလှငျ့လိုကျတာ ဒီတဈခါတော့ အရေးယူမခံရပဲ သူ့ channel ကိုလူပိုသိသှားတယျပေါ့လေ။ အရငျကတော့ Fortnite ကစားပွနတေဲ့အုပျစုတှထေဲကပါ။ အခုတော့ video ကိုပွနျဖွုတျခထြားတာတှရေ့ပါတယျ။
Tags cheat EA lives stream twitch